Darawal Shiineys ah oo loo ganaaxay arin cajiib ah - BBC News Somali
Image caption Darawalka dacwadda lagu soo oogay
Waxyar kadib ayaa waxaa usoo dhacay farriin loogu sheegayo inuu jebiyay shuruucda wadooyinka, oo uu gaariga waday isagoo "telefoon haysta". Farriinta ayaa waxaa la socday sawirka ay kaamerooyinka ka qaadeen.
Faarax Xaashi oo Dubai ugu xanniban 46,000 oo ganaax ah
Wakaalada Boostada Maraykanka oo loosoo direy xaanshi ganaax culus ah
Messi oo xabsiga loogu badeli karo ganaax lacageed
Liu ayaa wixii ku dhacay la wadaagay dadka adeegsada barta ay bulshada Shiinaha ku wada xiriirto ee Weibo. Waxa uu dadka la wadaagay farriinta loo soo diray iyo weliba sawirka laga qaaday, isagoo intaa ku daray in mas'uuliyiinta uu si fool ka fool ah ugu sharrixi doono waxa dhacay maadaama ay telefoonka isku fahmi waayeen.
Wargeyska Global Times ayaa markii dambe shaaciyay in mas'uuliyiinta taraafikada ay la laabteen dacwaddii loo haystay Liu, iyagoo sheegay in weji xoqashadiisa loo maleeyay inuu telefoon ku hadlayay.
Inta badan kaamerooyinkaasi waxaa ku xiran barnaamij ay kamid yihiin kuwa lagu aqoonsado wejiga qofka, qaarkoodna waxa ayba qiyaasi karaan da'da, jinsiga iyo isirka qofka ay sawireen.